कोरोनाविरुद्ध कहिले कुन खोप आइपुग्छ ? - Deutikhabar कोरोनाविरुद्ध कहिले कुन खोप आइपुग्छ ? - Deutikhabar
कोरोनाविरुद्ध कहिले कुन खोप आइपुग्छ ?
देउतीखबर आइतवार, फाल्गुन १६, २०७७
तेस्रो चरणको परीक्षण अनुमति पाउने विश्वका १० खोपमध्ये चीनमा विकास भइरहेको क्यानसिनो पनि एक हो। क्यानसिनोले शनिबार परीक्षण सुरु भएको जनाएको छ। उसले क्यानसिनो खोप मेक्सिकोमा परीक्षण गरिरहेको छ। १५ हजार नागरिकमा परीक्षण गरिने खोप मेक्सिकी अधिकारीबाट अक्टोबरमै अनुमति पाइएको कम्पनीले जनाएको छ। चिनियाँ सञ्चारमाध्यम ग्लोबल टाइम्सका अनुसार मेक्सिको सरकारसँग क्यानसिनोले ३ करोड ५० लाख खोप उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेको छ।
चीनमै बेइजिङ इन्स्टिच्युट अफ बायोलोजिकल प्रोडक्ट र सिनोफार्मका साथै बुहान इन्स्टिच्युट अफ बायोलोजिकल प्रोडक्ट र सिनोफार्मले संयुक्त रूपमा खोपको विकास गरिरहेका छन्। अमेरिकी कम्पनी नोभाभाक्सले पनि कोरोना खोपको तेस्रो चरणको परीक्षण अनुमति पाएको छ।
चीनको सिनोभ्याक बायोटेकले विकास गरेको कोरोना खोप भने विवादित बनेको छ। सिनोभ्याकले ब्राजिलको बुटान्टान इन्स्टिच्युटसँग सहकार्य गरेर तेस्रो चरणको खोप परीक्षण गर्ने तयारी गरेको थियो। तर, ब्राजिल सरकारले त्यसमा रोक लगाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। १ लाख ३० हजार स्वयम्सेवीमा खोप परीक्षण गर्ने तयारी थियो। ब्राजिलका स्वास्थ्य अधिकारीले त्यसमा रोक लगाएपछि सिनोभ्याकलाई ठूलो धक्का लागेको छ। ब्राजिल सरकारले खोपको सुरक्षामाथि प्रश्न उठाएको जनाइएको छ। सिनोभ्याकले भने खोपको सुरक्षामाथि कुनै प्रश्न नरहेको दाबी गरेको छ।
चीनको हुवेई प्रान्तको वुहान सहरमा अघिल्लो वर्ष डिसेम्बरमा पहिलो पटक कोरोना भाइरस भेटिएको थियो। त्यसबेला धेरै देशले सोचेका पनि थिएनन् कि कोरोना महामारीका रूपमा विश्वभर फैलिनेछ। त्यसैले चीनमा कोरोनाले भयावह रूप लिँदै गर्दा बाँकी विश्व आफ्नै धुनमा थियो। त्यसको परिणामस्वरूप केही महिनामै कोरोना चीनको सीमापार गर्दै विश्वका कुना–कुना पुग्यो। कोरोनाकै कारण लाखौंको ज्यान जानुका साथै करोडौं संक्रमित भए। विश्वका शक्तिशाली मुलुकहरूबीच कोरोनाको खोपको विकास गर्ने प्रतिस्पर्धा नै चल्यो।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले कुनै पनि खोपलाई आमनागरिकले प्रयोग गर्न मिल्ने गरी अनुमति दिइसकेको छैन। तर विभिन्न देशले खोप विकासलाई आफ्नो प्रतिष्ठाका रूपमा अगाडि बढाएका छन्। यति बेला शक्तिशाली मुलुकबीच कसले सबैभन्दा पहिला खोपको विकास गर्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा छ।
संगठनले विभिन्न निकायमार्फत विश्वभरका वैज्ञानिक, व्यवसायी र विश्वव्यापी स्वास्थ्य संस्थाहरूको सहयोगमा कोरोना नियन्त्रणमा काम भइरहेको जनाएको छ। तर, जब सुरक्षित र प्रभावकारी खोप फेला पर्छ तब सबै देशमा आमनागरिकको रक्षा गर्न ती खोप पुर्‍याइने संगठनको दाबी छ। त्यस्तै उसले सबै देशलाई खोपमा समान पहुँच र वितरणको सुविधा प्रदान गर्ने पनि जनाएको छ। उसले खोप वितरण गर्दा जोखिममा पर्ने व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइने स्पष्ट पारेको छ। (अन्नपूर्णबाट )
प्रकाशित मिति: आइतवार, फाल्गुन १६, २०७७
पूर्व सांसद दिबाकर गोल्छाको निधन- कांग्रेस महामन्त्री खड्काद्वारा दुःख व्यक्त
रेडक्रस सोसाइटिको जन्म विशुद्ध मानवीय सेवाको उद्धेश्यले भएको हो -प्रदेश प्रमुख खनाल
आज महाशिवरात्रि : आराध्यदेव भगवान शिवको पूजाअर्चना गरि मनाईंदै